Vaovao - Shenzhen TIZE Technology Co., ltd.
Ny fialana amin'ny rojoara dia mazava ho azy fa manome fampiononana fotsiny, fa ny fanaovana ny voarary faran'izay tsara sy ny vozon-doha, nylon nilamina dia tsy mahasosotra alika kokoa noho ny manao peratra mariazy na fehikibo volo ho antsika; tena tsy tsikaritr'izy ireo.Tamin'izay, na ny amboara amin'ny ankapobeny dia tokony esorina na tsia, dia miankina amin'ny alika sy ny toe-piainana izany. Amiko manokana dia esoriko ny vozon-tranonjaza rehefa mahazo antoka aho fa azo antoka ny alika, ary asaivo mitafy izy raha tsy azo atokisana na any amin'ny toerana tsy fantatra.
Mandaitra tokoa ny fefy alika elektrika?
Betsaka ny olona no mihevitra fa fefy herinaratra tsy mandeha amin'ny herinaratra any ambanin'ny tany no fomba tsara indrindra hitazonana ny alikany ao an-tokotaniny. Na izany aza dia tsy mahomby araka ny eritreritrao ny azy. Ny antontan'isa dia manondro fa ny fefy herinaratra tsy misy herinaratra dia tsy eo amin'ny 70% ihany.
Congratulation !! Nahazo ny tatitra momba ny BSCI i TIZE Tamin'ny Aprily 2020
Intertek Company Audert dia nanao ny fisafoana nandritra ny 7 aprily ka hatramin'ny 8 aprily tao amin'ny orinasa, ary nahomby izahay nahazo ny tatitry ny BSCI.
Ahoana ny fampiasana baiko fampiofanana alika elektronika?
Ny fiarovana dia zava-dehibe indrindra rehefa mampiasa rojo alika elektrika. Manaiky ny manam-pahaizana fa azo antoka ny e-collars rehefa ampiasaina araka ny tokony ho izy. Rehefa ampiasaina tsy tsinontsinona izy ireo dia mety tsy mahomby ary na mampikorontan-tsaina na mampatahotra ny alika aza.
Inona ny sombin-dambatra amin'ny alika?
Ny fisafidianana amboaram-boninkazo izay mety tsara dia miankina amin'ny antony vitsivitsy, ny fampidirana hoe firy ny volom-bolo azo esorina isaky ny alikao ny biby.